Ahoana ny fametrahana apache web Apache amin'ny Ubuntu 18.04? | Ubunlog
Ahoana ny fametrahana apache web Apache amin'ny Ubuntu 18.04?
Apache dia loharano misokatra, mpizara tranonkala HTTP miampita sehatra izay mampihatra ny protokol HTTP / 1.12 sy ny hevitry ny tranonkala virtoaly. Ny tanjon'ity tetikasa ity dia ny hanome mpizara azo antoka, mahomby ary azo zahana izay manome serivisy HTTP mifandrindra amin'ireo fenitra HTTP ankehitriny.
Ny mpizara tranonkala Apache Matetika izy io dia ampiasaina miaraka amin'ny motera database MySQL, ny fiteny scripting PHP, ary ny fiteny scripting hafa. malaza toa an'i Python sy Perl. Ity fanaingoana ity dia antsoina hoe LAMP (Linux, Apache, MySQL ary Perl / Python / PHP) ary mamorona sehatra matanjaka sy matanjaka ho an'ny fampandrosoana sy fizarana ireo fampiharana miorina amin'ny tranonkala.
1 Dingana fametrahana apache
2 Didy Apache fototra
3 Apache2 modules
Dingana fametrahana apache
Noho ny lazan'ilay fampiharana Azo jerena ao amin'ny trano fitahirizana amin'ny ankamaroan'ny fizarana Linux, noho izany dia tsotra ny fametrahana azy.
Amin'ny tranga Ubuntu 18.04 dia samy desktop sy mpizara hiantehitra amin'ny fonosana izay ao anatin'ny trano fitahirizana izahay.
Tsy mila manokatra terminal fotsiny isika ary manatanteraka ity baiko manaraka ity:
Solo tsy maintsy manamafy ny fametrahana isika ary hapetraka avokoa ireo fonosana ilaina rehetra hiasan'ny Apache amin'ny solosaintsika.
Vita ny fizotrany mila manamarina fotsiny isika fa napetraka tsara, noho io amin'ny terminal ampiasainay:
izay tokony hahazo valiny mitovy amin'izany isika:
Amin'izany dia hitantsika fa napetraka ny serivisy ary mandeha tsara. Na dia manana fomba hafa hanamarinana izany aza izahay.
El fomba iray hafa dia ny fangatahana pejy Apache, noho izany dia mila miditra ao amin'ny adiresy ip-ntsika fotsiny izahay.
Raha tsy fantatr'izy ireo ny adiresy IP an'ny solosainao, dia azon'izy ireo atao amin'ny fomba samihafa avy amin'ny tsipika fibaikoana.
Tsy maintsy manatanteraka ity baiko ity fotsiny isika:
Rehefa manao izany dia haseho antsika ny lisitr'izy ireo, afaka mandeha amin'ny fitiliana tsirairay amin'ny browser izy ireo, afaka mamantatra ny adiresy IP anay izahay rehefa aseho ao anaty tranokala ity manaraka ity:
Ity ny pejy Apache izay mampiseho amintsika fa mandeha amin'ny solo-sainantsika izy io ary mampiseho amintsika ny lahatahiry misy rakitra fisie sasany.
Didy Apache fototra
Efa manana ny mpizara tranonkala Apache mihodina eo amin'ny rafitray, mila mahafantatra baiko fototra vitsivitsy ianao izany, satria amin'ity no ahafahantsika manomboka na mampiato ny fizotrany raha ilaina izany.
Ny baiko roa lehibe indrindra dia ny manomboka sy miato ny serivisy amin'ny solosaintsika, ho an'ity ihany tsy maintsy manatanteraka amin'ny terminal isika rehefa te hanomboka Apache:
raha mbola hampijanona an'i Apache izay ataontsika:
Azontsika atao ihany koa ny avereno indray ny serivisy tsy ajanony, noho izany ihany no ampiharinay:
Ankehitriny, baiko iray hafa izay mety ho tena ilaina rehefa mandeha izy ary mila famelomana indray isika, azontsika atao ny manatanteraka an'io baiko io izay tsy hampifandray ireo fifandraisana efa misy miaraka amin'ny mpizara:
Raha te hanajanona ny serivisy ianao izahay ihany no manatanteraka:
Ary ho an'ny tranga mifanohitra amin'izany raha toa ka mamerina mamerina ny serivisy ao amin'ny ekipanay ihany no ampiasainay:
Apache2 dia mpizara iray izay afaka mifameno amin'ny modules. Ny fiasa manitatra dia misy amin'ny alàlan'ny modules izay azo ampidirina ao amin'ny Apache2. Amin'ny alalàn'ny default, napetraka ao amin'ny mpizara ny andiana modules amin'ny fotoana fanangonana.
Ubuntu dia manangona Apache2 hamela ny fametrahana maody mavitrika. Ny torolàlana momba ny fanitsiana dia mety ahitana fepetra misy ny Module amin'ny alàlan'ny fampidirana azy ireo ao anaty sakana .
Afaka mametraka modely Apache2 misimisy kokoa izy ireo ary mampiasa azy ireo amin'ny mpizara tranonkala. Ohatra, mihazakazaha ity baiko manaraka ity ao anaty konsol mba hametrahana ny modely fanamarinana MySQL:
sudo apt install libapache2-mod-auth-mysql
Ao amin'ny lahatahiry / sns / apache2 / mods misy anao dia azonao atao ny manamarina ireo modely manampy.
Apache dia manana maro amin'izy ireo, fa raha te hahalala bebe kokoa ianao dia manoro hevitra aho vakio ity fizarana ity izay zaran'ireo bandy avy any Canonical aminay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Ahoana ny fametrahana apache web Apache amin'ny Ubuntu 18.04?
Ruby, fametrahana ary famolavolana ohatra fototra ao amin'ny Ubuntu
SoundConverter, ahodino ireo rakitra audio amina endrika samihafa